Dhibbaa Chaartera keessaa ABO dhiibee baase – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooDhibbaa Chaartera keessaa ABO dhiibee baase
Qalbeessaa Dhangi’aatiin, Waxabajjii 8, 2021
Boodarras Hayila Sillaaseen hoggantootaa fi miseensota Waldaa kanaa kaan hidhee kaan ammoo ajjeesuu jalqabe.
Geggeessaa waraanaa olaanaa fi hogganaa Waldaa kanaa kan ta’e Jeneraal Taaddasaa Birruus qabamee hidhame. Akka seenaan eerutti yaaddoon guddaan Waldaa kana irraa Nafxanyoota biraa eegale, Waldaan Maccaa fi Tuulamaa bifa hojii hawaasaa uummataaf hojjechuun haa ijaaramu malee gara dhaabbata siyaasaatti socho’aa jira shakki jedhu horachuu fi Waldaan kun Oromoo Maccaa fi Tuulamaa walitti hidhee ka’ee daranuu guutummaa Oromiyaa tokkummeessuuf sochii inni gara Kibba Baha Oromiyaa uummata Oromoo Baalee waliin hidhata gochuuf deemsa eegaluu dhaga’uun rifaatuu guddaa Hayila Sillaaseetti uumee ture.
Alii Ahmad- Dura taaa waldaa qottoota konyaa Carcar.
Abdallaa Badhaasoo Dura taaa waldaa qottoota ona mieessoo
Faqaaduu Damisee Barreessaa
Taammiraat Balaay wal-qunnamsisaa waldaa qottoota
Umar Ahmad fi Dhaabaa kan jedhamanii fi hakiimummaa kan tajaajilan
Sh\_ Mahammad Naasir Abduu Ahmad
Usumaan Alii qabduu maallaqaa fi barreessaa waldaa qottoota araddaa
Hasan Adam Itti gaafatamaa misooma kutaa Harar kan turan. Humni Dargii maqaa Farra Warraaqsaa itti moggaasuun kan hiraarse ta’uu saaxila.
Taayyee T/Maariyaam (Kumaa Dammaksaa) oggaa sana barsiisaa ijoollee kutaa 4ffaa gad baratanii kan ture.
Taayyee Dhibbisaa (Yoonaattaan) Waajjira Taamiraat Laayinee keessa ergamaa poostaa deddeebisaa kan ture.
Baacaa Dabalee sirbituu fi gitaara rukutaa kan ture.
Minaasee W/Gioorgis (A/Duulaa Gammadaa) hakiima waraanaa (Buttaa) kan ture.
Takkaalinyi Tafarraa (Ibraahim Malkaa) qondaala waraanaa Wayyaanee kan turan akka bu’uuressitoota OPDO TPLF bocce.
ABO fi DhDUO/PDO Berhanu Hundee tin, Mudde 19, 2018 Akka yeroo ammaa dhagahamaa fi hubatamaa…